I-SQL Injection iyingozi ejwayelekile, okuyinto abaduni abaningi abayisebenzisayo kuze kube namuhla. Lokhu kuhlaselwakungenza ukwehlisa ukuphepha nokuyimfihlo kokusebenzisa iwebhusayithi. Isebenzisa ukukhubazeka kwekhodi yewebhusayithi eveza imbobo yokuphepha,okuyinto abaduni bangakwazi ukufinyelela database of isayithi. Kusukela kulo mqondo, kuthatha umzamo wabaqaphi abanolwazi ukuthola izimpande futhifikela iseva kusuka endaweni eyikude ngokusebenzisa inethiwekhi - avene hydrance optimale spf 20 precio. Nge-SQL Injection, umuntu angakwazi ukuqoqa ulwazi kusuka kuwebhusayithinjengegama lomsebenzisi, amaphasiwedi nolwazi lwekhadi lesikweletu.